အမျိုးသားပြတိုက်(ရန်ကုန်) မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် အလိုအလျောက် အရေးပေါ် မီးအချက်ပေးစနစ် တပ်ဆင?? - Yangon Media Group
အမျိုးသားပြတိုက်(ရန်ကုန်) မီးဘေးလုံ ခြုံရေးအတွက် အလိုအလျောက် မီးအရေးပေါ်အချက်ပေးစနစ်တပ် ဆင်ထားပြီဖြစ်သော်လည်း ခေတ် မီမီးငြှိမ်းသတ်သည့်စနစ်များ တိုးချဲ့တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်နေသေး ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါစနစ်ကိုတပ်ဆင်နိုင်ရန်ဘတ်ဂျက်လိုအပ်ပြီး ဘတ်ဂျက်ချထားပေးမှုအပေါ်မူတည်၍ ဆောင်ရွက်နေရခြင်းဖြစ်သည်။
”မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် နှစ်စဉ်စီမံချက်တွေရေးထားတာ တွေရှိပါတယ်။ မီးဘေးစီမံချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆရာမတို့ပြတိုက်ထဲမှာ Fire Alam စနစ်တွေတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ၆၉ ခု Sensor တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီအ ဆောက်အအုံဟာ ၁၉၉၆ ခုနှစ်ကတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်လို့ အခုဒီနှစ်ဆိုရင် ၂၂ နှစ်လောက်ကြာပြီ။ကြာကတည်းက လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက် ခေတ်မီတဲ့ နည်းစနစ်တွေမဟုတ်သေးဘူး။ ခေတ်မီတဲ့ နည်းစနစ်တွေနဲ့ ပြန်လည်ပြင်ဆင်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်လည်းရှိပါတယ်။ ပြတိုက်ကြီးမှာ ရေကန်တွေလည်းထားရှိထားပါတယ်။ တကယ်တမ်းဖြစ်လာရင်လည်း မီးသတ်ကရေစုပ်ပြီးတော့ ပက်ဖျန်းတာတွေလည်းလုပ်နိုင် အောင်လုပ်ဆောင်ထားတာရှိပါတယ်။ ပြခန်းတိုင်းမှာ မီးသတ်ဘူး တွေထားရှိတာရှိပါတယ်။ ဆေးဘူး တွေထားရှိတဲ့အပြင်ကို မီးသတ်ဆေးဘူးတွေကို ဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတာကို မီးသတ်ဦးစီးဌာနက လူ တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ ဆရာမတို့ ဒီကဝန်ထမ်းတွေကိုသင်ကြားပေးထားတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဆရာမတို့ Smoking Dalta တပ်ထားတယ်။ မီးခိုးငွေ့ရလျှင်အချက်ပေးတဲ့ စနစ်ထားရှိထားပါတယ်။ ခေတ်မီ မီးငြှိမ်းသတ်ရေးစနစ်(အလိုအ လျောက်ရေပက်ဖျန်းငြှိမ်းသတ်တဲ့စနစ်)တွေကတော့ မရှိသေးပါဘူး။ ဘတ်ဂျက်အနေအထားအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ တပ်ဆင်ခြင်းတွေ ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်မှုတွေလည်းလုပ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်”ဟု အမျိုးသား ပြတိုက် (ရန်ကုန်)ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်နန်းလောဝ်ငေးကပြောသည်။
ပြတိုက်များမီးဘေးလုံခြုံရေး အတွက်ရှေးယခင်ကတည်းက ဂရုတစိုက်ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း နှင့်ယခုခေတ်မီစနစ်များတပ်ဆင်နိုင်လျှင်လည်း ပိုကောင်းမွန်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ”ပြတိုက်တွေစတင်တည် ဆောက်စဉ်ကတည်းက မီးဘေးအတွက် Alam တွေပါပြီးသားပါ။လွန်ခဲ့တဲ့ခုနစ်နှစ်လောက်ကတည်းက မီးသတ်ဆေးဘူးတွေအပြင် အမျိုးသားပြတိုက်(ရန်ကုန်)မှာ မီးသတ်ဆေးဘူးကြီးတွေပါတဲ့ တွန်းလှည်းတွေလည်းအရန်အနေနဲ့ထားထားတယ်။ ပြတိုက်လုံခြုံရေးတွေကလည်း နေ့ညမပြတ်လည်းရှိနေပါတယ်။ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွေကလည်း ပြတိုက်ဝင်းထဲမှာရှိပါတယ်။ တော်တော်လေးစနစ်တကျလုပ်ထားတာဆိုတော့ စိတ်ချရပါတယ်။ ပြတိုက်အနီးမှာလည်း လောင်စာ တွေလည်းမရှိပါဘူး။ အခုနောက် ပိုင်းပေါ်လာတဲ့ခေတ်မီတဲ့စနစ်တွေ၊ အလိုအလျောက်ရေဖျန်းတဲ့စနစ် တွေကိုတပ်တာတော့ပိုကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်တတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ လေ”ဟု ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး(ငြိမ်း)၊ Myanmar Heritage Trust မှ ဒေါ်စန္ဒာခင်က သုံးသပ်ပြောသည်။
မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် အမျိုးသားပြတိုက်(နေပြည်တော်)တွင် မီးအရေးပေါ် အချက်ပေးစနစ်များတပ်ဆင်ထားပြီး မီးဘေးလုံခြုံ ရေးအတွက် လစဉ်ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း သိရသည်။ ”ကျွန်တော်တို့အမျိုးသား ပြတိုက်(နေပြည်တော်)မှာတော့ မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် Fire Fighting စနစ်တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ မီးလောင်တာနဲ့ အလိုအ လျောက်ထလည်ပါမယ်။ မီးသတ်ဖို့ မီးသတ်ခေါင်း(ပိုက်ခေါင်း)တွေ၊ မီးသတ်ဆေးဘူးတွေ အသင့်ထားရှိထားပါတယ်။ တစ်လကိုနှစ်ကြိမ် လောက်ကြိုတင်လေ့ကျင့်တာတွေလည်းပြုလုပ်ပါတယ်”ဟု အမျိုးသား ပြတိုက်(နေပြည်တော်)မှ လက် ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးထွန်းထွန်းလွင်ကပြောသည်။ သြဂုတ် ၃ ရက်တွင် ဘရာဇီးနိုင်ငံရှိရှေးဟောင်းအမျိုးသားပြတိုက်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမျိုးသားပြတိုက်များတွင် မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် စိုးရိမ်မှုများရှိနေကြောင်းနှင့် ဘရာဇီးနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံ၏အစိုးရမှပြတိုက်အတွက် ဘတ်ဂျက်ငွေများဖြတ် တောက်လိုက်သည့် အချိန်တွင် ပြတိုက်လုံခြုံရေးနှင့် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို သေချာဆောင်ရွက်ထားနိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့် မီးလောင်ချိန်တွင် မီးသတ်ခေါင်းမှရေထွက်လာခြင်းမရှိဘဲ မီးလောင်ဆုံးရှုံးမှု များပြားသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်းပြတိုက်များလုံခြုံရေးနှင့် ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများအတွက်လုံလောက် သော ဘတ်ဂျက်များရှိရန်လိုအပ် ကြောင်းနှင့်လက်ရှိအချိန်တွင် မီး ဘေးလုံခြုံရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ထားကြောင်းသိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ အဆင့်မြင့်မီးသတ်အရာရှိတစ်ဦးက ”ရှေးဟောင်းပြတိုက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ မီးဘေးလုံခြုံရေးကို အထူးဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ပြတိုက်ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ညှိနှိုင်း ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်” ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ပြောသည်။ ပြတိုက်များတွင် မီးအရေးပေါ် ဖြစ်လာပါက အချက်ပေးစနစ်များ တပ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ မီးဘေးလုံ ခြုံရေးအပြည့်အဝရရှိရန် ပြတိုက် တာဝန်ခံများနှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ပြီးဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆက်လက် ပြောသည်။ ”မီးဘေးအတွက် မကြာခဏဆိုသလိုသွားရောက်စစ်ဆေးနေ ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းမှာဆို ရန်ကုန်တိုင်းမီးသတ်ဦးစီးမှူးရုံးကနေကြီး ကြပ်ပြီးတော့စစ်ဆေးဆောင်ရွက်တာတွေရှိပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြော သည်။
ပြတိုက်တာဝန်ရှိသူများအနေနှင့်မီးသတ်ကိုချည်းအားမကိုးဘဲနဲ့ ပြတိုက်များမီးဘေးကင်းဝေးအောင်လိုအပ်သည့် မီးဘေးလုံခြုံရေးအစီ အမံများအပြည့်အဝထားရှိမည်ဆိုပါက စိတ်ချရမည့်အခြေအနေ ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ အဆင့်မြင့် မီးသတ်အရာရှိတစ်ဦးကပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သာသနာ ရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့်အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနလက်အောက်တွင် ပြတိုက်ပေါင်း ၃၃ ခုရှိပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးနှင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြတိုက်အ နေဖြင့် စုစုပေါင်းပြတိုက် ၆ဝ ခန့်ရှိ လာကြောင်း ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့်အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၂၅ နှစ်အတွင်း အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်သော JB မုန်တိုင်း အိုဆာကာမြို့သို့ ဖြတ်ကျော
တွံတေး တူးမြောင်းအတွင်း လုယက်သူသုံးဦးကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခမ်းဆီးရာ နှစ်ဦးသေဆုံး၊ ဓားဒဏ
စီးတီးတက္ကစီယာဉ်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသော တက္ကစီယာဉ်များကို အရေးယူရန် သီးခြားညွှန်ကြ??
မန္တလေး ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် အားကစားကွင်း တိုက်ခန်းရှေ့ တွင် Crown အဖြူရောင် ယာဉ်ပေါ်မှ ငွေကျပ် ?